नेपाल आज | प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भीम रावलमाथि निशाना ( भिडियोसहित )
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भीम रावलमाथि निशाना ( भिडियोसहित )
सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा आन्तरिक गुटवन्दीको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत देखा पर्न थालेको छ । नेताहरु गुटगत वहससंगै व्यक्तिगत तहमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेपछि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यसको नकारात्मक अशर परेको छ । हुँदाहुँदा पार्टी गतिविधि र सरकार संचालनमा समेत थुप्रै समस्या देखिन थालेका छन् ।
यीनै सन्दर्भमा हामीले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम सांसद झपट रावलसंग कुराकानी गरेका छौं । सांसद रावलले बताएका केही महत्वपूर्ण बुँदा यस्ता छन् :
क ) ढिलै भएपनि नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार चयन गरेको छ । समयहुँदा सुतेर बस्ने र अन्तिममा आत्तिने नेतृत्वका कारण सभामुख चयनमा विलम्ब हुन पुग्यो । यसबाट संसद् बन्धक बन्यो । कानुन निर्माणका थुप्रै काम अवरुद्ध हुन पुगे, सांसदहरुले जनताका समस्या उजागर गर्न पाएनन् ।
ख ) नयाँ सभामुखसंगै अब एमसीसीका विषयमा थप अध्ययन हुने विश्वास छ । संसद्ले एमसीसीका विषयमा अध्ययन समिति बनाउनुपर्छ । तत्काल जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पास गरे देशमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेछ । यसका शर्तहरु निकै हानिकारक छन् ।
ग ) अग्नि सापकोटा उम्मेदवार हुने वित्तिकै उनको ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको विषय उठाउन थालिएको छ । यो गलत हो । सापकोटा चुनाव जितेर सांसद भइ मन्त्री समेत भैसकेका नेता हुन् । अहिले उनको विषयमा द्वन्द्वकालिन मुद्दा उठाउनु भनेको अस्थिरता उत्पन्न गराउने षडयन्त्र मात्र हो ।
घ ) कुनैपनि विदेशी सहयोग लिन सकिन्छ, तर त्यो समानताका हिसाबमा हुनपर्छ । नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । विदेशीले नेपालीको माया दया गरेर सहयोग गर्ने होइन । उनीहरुले आफनो स्वार्थ पूर्ती गर्न सहयोगको वाहना मात्र गर्छन् । मुख्यतः नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधनमा उनीहरुको गीद्धे नजर छ ।
ङ ) सरकारबाट भैरहेका गलत कामबारे प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई अहिले धम्क्याउने काम भैरहेको छ । नेकपा नेता भीम रावललाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले धम्क्याएका छन् । यस्ता तत्वलाई प्रधानमन्त्रीले चिन्नुपर्दछ ।
च ) हिजोको दिनमा बामदेव गौतम, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई खुइल्याउनेहरु आज रावलमाथि खनिएका छन् । नेताहरुमाथि एकपछि अर्को गर्दै आक्रमण गर्नेहरुलाई किन बारम्बार पुरस्कृत गरिन्छ ? प्रधानमन्त्रीको नजिक बस्दैमा असनको साँढे जस्तो हुन मिल्छ ?
छ ) प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार छन्, समाजले नपचाउने शब्द बोल्छन् । एउटा सल्लाहकारले ‘छौंडा’ लेखे । यो आपत्तिजनक शब्द हो । अर्कोले हालै ‘पापाराजी’ लेखे । जुन शब्दको अर्थ आफूलाई नै थाहा छैन, त्यो किन लेख्ने वा अरुलाई भन्ने ?
ज ) सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भीम रावलको जिल्लामा छाउपडी प्रथा किन नहटेको भनेछन् । मन्त्री बास्कोटालाई ‘छाउपडी’ को अर्थ नै थाहा छैन । जसले समाज र संस्कृति बुझेको छैन, उसको कुराले दुनियाँ हँसाउने मात्र हो । सुदूरपश्चिममा ‘छाउ’ भनेको रजश्वला र ‘पडी’ भनेको ‘भइ’ हो । यसको अर्थ रजश्वला भइ भन्ने हो । यो प्रथा होइन । मान्छेले बनाएको कुरालाई प्रथा भनिन्छ । गोठ चाहिं मानिसले बनाएका हुन् ।
झ ) ‘छाउपडी’ बन्द गर्ने भनेको कसैको वशमा छैन । यो प्राकृतिक कुरा हो । के गोकुल बास्कोटा र सूर्य थापा छाउपडी नभइ जन्मेका हुन् ?
ञ ) राजनीतिमा व्यापारीकरण र अपराधीकरण बढेको छ । यसले नेकपालाई पनि गाजेको छ । निष्ठा, सिद्धान्त, कर्तव्य, आदर्श भन्ने कुरा हराउँदैछन् । राजनीतिमा इमान नभएका, दलमात्रै बदल्नेहरुलाई अहिले पनि मन्त्री बनाइएको छ ।
ट ) कानुनी सर्वोच्चता सबैभन्दा ठूलो हो । न्यायालय नेकपाको केन्दीय कमिटी होइन । यसकारण कसैले टुँडिखेलबाट जेल सजाय भोगिरहेकालाई बाहिर निकाल्छु भन्नु अपरिपक्व अभिव्यक्ति हो ।